किन विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध ? | Alagdhar
घरBanner Newsकिन विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध ?
किन विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध ?
काठमाडौं: सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूह आपराधिक संगठनका रूपमा उद्यत भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले वार्तामार्फत राजनीतिक सहमतिका लागि गरेको प्रयासलाई उपेक्षा गर्दै विप्लव समूहले मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको निष्कर्षसहित उसका सबै प्रकारका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
राजनीतिक आवरणमा जनतालाई आतंकित पार्ने, जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने, जनप्रतिनिधिलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने तथा विभिन्न स्थानमा विस्फोट गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको ठहरसहित मन्त्रिपरिषद्ले उक्त समूहका सबै प्रकारका गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा विप्लव समूहले जनप्रतिनिधिलाई राजीनामाका लागि दबाब दिँदै आएको थियो । ती प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै जनप्रतिनिधिको बाहुल्य छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिले पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वलाई समेत विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि र आफूहरूको सुरक्षामा खतरा रहेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय राजधानीमै पनि विस्फोटका घटना हुन थालेपछि सरकारले उक्त समूहलाई कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले वार्ताका लागि पहल गरे पनि विप्लव समूह वार्तामा आएको थिएन ।
केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवको पार्टीका गतिविधिका सम्बन्धमा कडा प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । मंगलबार बिहानमात्र प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा र विस्फोटबाट आतंक मच्चाएर लुटपाट गर्ने समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने प्रस्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री निवास पुगेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोलीसँग उनले बम पड्काउने र पैसा असुल्नेहरूसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले विलवको पार्टी नेकपालाई ‘लुटेराको समूह’ भन्ने संज्ञा दिँदै नेकपा भन्नै लाज लाग्न थालेको बताएका थिए । केही दिनअघि उनले चक्कु देखाएर चन्दा उठाएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । हालैको एक सुरक्षा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लवको पार्टीसँग राजनीतिक व्यवहार नगर्ने बताएका थिए ।
सोमबार पोखरामा सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २५ वर्षअघिको जुस्तै सशस्त्र युद्धको सपना नदेख्न विप्लवलाई सुझाव दिएका थिए ।
फागुन २४ गते संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट भएको थियो । उक्त घटना विप्लव नेतृत्वकै नेकपाले गराएको बताइएको छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन आएका व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कतिपयले वार्ता गर्नुपर्‍यो भन्छन् तर केका लागि वार्ता गर्ने ? उनीहरूले गरेका क्रियाकलाप राजनीतिक हुन् ? बम पड्काउने, आतंकित पार्ने, पैसा असुल्ने कुरा राजनीतिक हुन सक्दैनन् ।’ उनले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिइने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको समूहलाई संकेत गर्दै भने, ‘कम्युनिस्टले त युवाहरूलाई कर्मठ र कर्मशील हुन, सही बाटोमा हिँडाउन र उत्पादनमा लाग्न सिकाउनुपर्ने हो, यहाँ त कम्युनिस्टको नाममा युवालाई लुट्न सिकाइरहेका छन् । यो हुन सक्ने कुरा होइन ।’
केही दिनअघि ललितपुरका नख्खुमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल कार्यालयको गेटका गराएको विस्फोटमा एकजनाको मृत्यु भएको थियो । लगत्तै विभिन्न ठाउँमा एनसेलका टावरहरूमा आगजनी र विस्फोट भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार विप्लव नेतृत्वको समूहले जनयुद्धका क्रममा लुकाएर राखेका हतियार प्रयोग गर्न थालेपछि सरकारले उसका गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । पछिल्ला दिनमा सो पार्टीका केही कार्यकर्ता घातक हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । माओवादी जनयुद्धका क्रममा प्रयोग भएका हतियार बरामद भएपछि सुरक्षा निकायले सम्भावित खतराबारे सरकारलाई अवगत गराएको थियो । सो पार्टीले भारतबाट समेत हतियार ल्याउन थालेको सूचना सुरक्षा निकायले दिएपछि सरकार थप गम्भीर भएको हो ।
गत साता कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–९ को शिवगढी गाउँमा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको दल नेकपाका कार्यकर्ताको घरमा छापासमेत मारेको थियो । विप्लवकै गाउँमा छापा मार्न पुगेको प्रहरी टोलीलाई स्थानीय विद्यालयका बालबालिका प्रयोग गरी सो पार्टीका कार्यकर्ताले प्रहरीलाई अवरोध सिर्जना गरेका थिए । कानुनीरूपमा ‘प्रतिबन्धित’ घोषणा नहुँदासम्म सो समूहमाथि कारबाहीमा समेत असहज अवस्था भएको सुरक्षा निकायको गुनासो थियो ।
विप्लवको पार्टी यही बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विप्लवलको पार्टीका एक नेताले सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अघिल्लो लेखमारोकिएन नदीजन्य पदार्थको उत्खनन
अर्को लेखमाराजपाको अवरोधः प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित